ပန်ဒိုရာ: Finding Art in the City
အခုတလောတော့ Singapore Art Museum ဘက်ကို ခြေဦးလှည့်ဖြစ်တယ်။ FX Harsono လို့ အမည်ရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ Testimonies ဆိုတဲ့ အနုပညာပြကွက်တွေကို ငေးမိပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်းကလည်း စင်္ကာပူမှာ သူ့လက်ရာတွေ ပြသခဲ့သေးတယ်တဲ့။ အနုပညာတွေဟာ ခေတ်ရဲ့ လူမှုရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေကို ထင်ဟပ်နေတယ် မဟုတ်ပါလား။ အနုပညာအကြောင်း အများကြီးနားမလည်လည်း ဟာဆိုနို တင်ပြထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကတဆင့် သူဘာကို ပြောပြချင်တယ် ဆိုတာကို ဘယ်သူမဆို အနည်းနဲ့အများ ခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။
Paling Top’ 75
၁၉၇၀ ကျော်ကာလတွေမှာ ဟာဆိုနို အပါအ၀င် အင်ဒိုနီးရှားပန်းချီဆရာတစုက အနုပညာသစ် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု အနေနဲ့ သမားရိုးကျ ပန်းချီ ပန်းပုရဲ့ ဟိုမှာဘက်ကို ကျော်လွန်ပြီး နေ့စဉ်သုံးစွဲတဲ့ အရာဝတ္တုတွေကို ပေါင်းစပ်သုံးစွဲလာတဲ့ အနုပညာတွေ ဖန်တီးခဲ့ပါသတဲ့။ Paling Top’ 75 ဆိုတဲ့ ပြကွက်မှာ သစ်သားဘောင်ထဲမှာ ၀ိုင်ယာကြိုးတွေ ကာရံထားတဲ့ သေနတ်တစ်လက် (ပလတ်စတစ် သေနတ်တု) ကို ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာ ၁၉၇၅ ကာလတွေက အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ရဲ့ အင်အား လွှမ်းမိုးမှု နဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အနေအထားကို ဖော်ကျုးထားတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
Power and the Oppressed
အခန်းထဲမှာ ပလ္လင်ဆန်ဆန် ကုလားထိုင် တစ်လုံးတည်း ချထားပါတယ်။ ကုလားထိုင်ရဲ့အနားမှာ သံဆူးကြိုးတွေ ရစ်ခွေဝိုင်းပတ်ထားပါတယ်။ ကုလားထိုင်ရဲ့နောက်မှာ မီးတောက်တွေ လွန့်တက်နေဟန် ရုပ်ပုံကားချပ်တွေကို နံရံမှာ ကပ်ထားတယ်။ အဲဒါတွေက ဂျာဗားလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာကို ဖော်ကျူးတယ်။ ဆူဟာတိုလက်ထက်က တခြားလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာကို ဆိုလိုတယ်။ ကုလားထိုင်ရှေ့မှာ စနစ်တကျ တန်းစီ ချထားတာကတော့ မြေမှုန်အနက်ပုံတွေ အများအပြားပါ။ အဲဒီမြေကြီးမှုန်တွေပေါ်မှာ အနီရောင်စွန်းပေနေတဲ့ အ၀တ်ဖြူကို တင်ထားပြီး အဲဒီပေါ်မှာ သစ်ကိုင်းခြောက်လို တုတ်နှစ်ချောင်းကို တုတ်ဖျားချင်း ကြက်ခြေခတ်ပြီး ချထားတယ်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်က ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ လူသောင်းနဲ့ချီပြီး သွေးမြေကျခဲ့ရတာကို ဖော်ကျူးသတဲ့။
Voice Without Voice/Sign
ပြခန်းထဲက နံရံမှာ ကားချပ် ၉ ခု တန်းစီ ထောင်ထားပါတယ်။ ကားချပ်တစ်ခုစီမှာ လက်သင်္ကေတ တစ်ခုစီရဲ့ ပုံတွေကို ပြထားတယ်။ ဒါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသုံး လက်ဟန်ခြေဟန် သင်္ကေတ တွေပါ။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ တစ်လုံးစီကို ဖော်ညွှန်းတယ်။ D-E-M-O-K-R-A-S-I တဲ့။ လက်ဟန်ခြေဟန်ကို ပြတဲ့အတွက် အသံမထွက်ခြင်းကို ဆိုလိုတယ်။ လူတွေရဲ့အသံကို မထွက်နိုင်အောင် လုပ်ထားတယ်လို့လည်း ဆိုလိုသတဲ့။ နောက်ဆုံးစာလုံး I မှာတော့ သင်္ကေတ ပြနေတဲ့လက်ကို ကြိုးနဲ့တုပ်နှောင်ထားတဲ့ ပုံကို ပြထားတယ်။ ပြပွဲရဲ့ အညွှန်းစာအုပ်ကလေးမှာ ဒီပြကွက်ကို ရှင်းလင်းထားတဲ့ စာပိုဒ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ နည်းနည်း တွေးသွားရတယ်။ မူရင်းစာပုဒ်တွေထဲက နောက်ဆုံး စာကြောင်းတချို့ကို ထုတ်နုတ် လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာပဲ ဘာသာပြန်ကြည့်ကြပါလေ။
… While the work spells out uncompromisingly the demand for democracy, it is alsoasign of the impossibility or futility of political action. Demokrasi (democracy) exists only asaseries of empty gestures; it is represented purely asasign, an abstraction, rather than concrete reality.
The Voices Controlled by the Powers
သစ်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးစွပ်တွေ အများကြီး ချထားပါတယ်။ မျက်လုံးနဲ့ နှာခေါင်းပါတဲ့ အပိုင်းတွေကို ဖြတ်ပြီး လေးဘက်လေးတန်က ၀ိုင်းပြီး စီထားတယ်။ အောက်က ပါးစပ်ပါတဲ့ အပိုင်းတွေက အလယ်မှာ ခင်းကျင်းထားတယ်။ ဒါဟာလည်း ဖိနှိပ်မှုတစ်ခုအောက်မှာ ပြောရေးဆိုခွင့်မရှိခဲ့ရပုံကို ပြသထားတာပါ။ ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးထဲမှာတော့ လူနည်းစု လူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုပါ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရပုံကို ပြချင်တာလို့ ဆိုတယ်။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ ပြကွက်တွေရှိသေးတယ်။ Burned Victims ဆိုတဲ့ ပြကွက်မှာ မီးကျွမ်းလောင်နေတဲ့ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ တွေ ဖိနပ်တွေကို performance သရုပ်ဖော် ဗွီဒီယိုနဲ့တကွ ပြထားတာယ်။ (အထက်က ပြထားတဲ့ Voice Without Voice/Sign ရဲ့ ရှေ့မှာပါ။) Thousands Times Pain ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ပင်အပ်တစ်ခုစီနဲ့ ထိုးစိုက်ပြီး နံရံမှာ တန်းစီကပ်ထားတဲ့ ပျားအကောင်တစ်ထောင်ရဲ့ ပုံ။ Open Your Mouth ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ လူတစ်ယောက် (ပန်းချီဆရာကိုယ်တိုင်ရဲ့ပုံ ထင်ပါတယ်) ပါးစပ်ကို အတင်း ဆွဲဖွင့်နေတဲ့ ပုံမျိုးစုံ တန်းစီ ပြထားတာတွေ စတဲ့ ပြကွက်တွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ ပြကွက်တွေအားလုံးမှာလည်း သက်ဆိုင်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုသမိုင်းကြောင်း ကိုယ်စီနဲ့။ အသေးစိတ် နမူနာသိချင်ရင်တော့ ဒီ link မှာ brochure လေး download ယူလို့ရပါတယ်။ http://www.singaporeartmuseum.sg/exhibitions/
ဓာတ်ပုံမရိုက်ရဘူးလို့ ရေးထားတာတော့ မတွေ့မိဘူး။ ဟန်းဖုန်းနဲ့ ရိုက်တော့ အစောင့်တွေက ဘာမှမပြောကြဘူး။ ခွင့်ပြုမပြု သိပ်မသေချာတာနဲ့ အများကြီး မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ပုံတွေက ၀ါးတားတားလည်း ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ဟာဆိုနိုရဲ့ပြကွက်တွေက မေလ ၉ ရက်နေ့အထိ ပြထားမှာပါ။ သောကြာနေ့တိုင်းမှာ ညနေ၆ နာရီကနေ ၉ နာရီကြားမှာတော့ ပြတိုက်ထဲကို ၀င်ကြေးမဲ့ (free of charge) ၀င်လို့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့ ၀င်ကြေး အနည်းငယ် ပေးရလိမ့်မယ်။ စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်သူတွေ စိတ်ဝင်စားရင် သွားကြည့်ကြပေါ့နော်။ လိပ်စာသိချင်ရင် စောစောက လင့်ခ်မှာပဲ ရှာလို့ရပါတယ်။
Posted by pandora at 12:29 AM
အခုလို့ သိရတာ ကျေးဇူးပါဗျာ၊ စကားမစပ် မန်ယူ
ဘောလုံးအသင်းတော့ ညက ရှုံးသွားတယ် ...း)
thanks for sharing မပန်။
အဲဒီလို အနုပညာမျိုးနဲ့ကျ ဝေးတယ်။ ပန်းချီရောပဲ။ ဘေးကရှင်းပြရင်တောင်မှ ဝါးတားတားပဲ။
အစ်မရေ မအားတဲ့ကြားက အခုလို တကူးတက မျှဝေပေးတဲ့အတွက် အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးစကားဆိုပါတယ်။
ပြတိုက်တွေမှာ တမေ့တမော လျှောက်ကြည့်ပြီး တွေးရတာ ၀ါသနာပါတယ်။
၀င်ကြေးအခမဲ့ ပြတိုက်တွေတော့ သွားဖြစ်တယ်။ တချို့ပြတိုက်တွေကတော့ ဈေးအတော်ကြီးလို့ မသွားဘူး။
Fantastic blog, I had not come across pandora-and-pandora.blogspot.com previously during my searches!
[url=http://saclongchampa.page.tl/]sac longchamp moins cher[/url] Turn the rabbit on its side and slide the boning knife up into the separation between the torso and legs to sever the front legs. Repeat on the other side. Leave the back legs Noble and Fashion Women Mulberry Medium Bayswater Leather Tote Bag Black,reasonable price in Mulberry Factory Shop. for now. MTI gear (sometimes labeled as "Swift") can be purchased at almost any martial arts store or resource. Because it isawell-known name, one should not have any trouble in findingagood source of sparring gear atadiscounted price. Simply bring your questions to an online martial arts store and you should get the items you needs..
[url=http://longchampsoldes.blog.com/]sac longchamp moins cher[/url] The Particular: erina kors Shop discount Highly Appreciated Mulberry Women's East West Bayswater Printed Leather Shoulder Brown Bag and handbags from our Mulberry outlet UK store, all kinds of Mulberry ON SALE NOW! iphone4I really don't proper just what is the design and style, We really like shoes. I have found myself personally just like an old vampire, discussion which includes adolescents is essential viewpoint. Some for the reason that In michael kors handbagsattractive footwear, I just make latest seeks each individual time, plus normally remodel their particular inside device..
[url=http://longchamppliagea.sublimeblog.net/]sacs longchamp[/url] I am also rarely influenced with regards to branding, status symbols or social influence when it comes to making purchases. So, I really don't care about the appearance ofacar, unless the appearance is so extreme as to be distracting (stands out either because it is too flashy. or because it is an unbelievably hideous colour or looks likeamis-matched, rusted piece of junk).. I always love to give little goodie bags to my girls classmates and friends. They usually include candy, pencils, erasers, plastic spiders, sticky hands/body parts, maybeacookie. and PLAY-DOH. Joop produces high-quality things and are elegant and look good. And that's why I wanted to write something here on this side of the handbag brand. Written as I've seen so via other Mulberry luggageÂ bags online sale Mulberry Outlet Standard Alexa Leather Satchel Red Bag at auction designer handbags brands, I thought that this one also has to write something about Joop...